TVU ကွန်ယက်များသည်မည်သည့်နေရာမှမဆို QOS ၀ န်ဆောင်မှုသစ်မှ IP မှဗီဒီယိုများကိုတိုက်ရိုက်အာမခံသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » TVU ကွန်ယက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနယူး QOS ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကနေ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအာမခံ
TVU ကွန်ယက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနယူး QOS ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကနေ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအာမခံ
Mountain View, CA - TVU ကွန်ယက်တိုက်ရိုက်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာရှည်တဲ့ဆဲလ်ကွန်နက်ရှင်တည်ရှိအဖြစ်, မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဆယ်လူလာကွန်ရက်ကျော် 2Mbps ၏နိမ့်ဆုံးမြန်နှုန်းမှာတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်အာမခံမယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမိတ်ဆက်သည်။ TVU CAN (ဆယ်လူလာအာမခံချက်ကွန်ယက်) တိုးမြှင် transmission အတွက် TVU ရဲ့စီးပွားဖြစ်ပြောင်းပြန် StatMux Plus အား (IS +) algorithm နှင့်အတူဘက်ပေါင်းစုံတစ်ဦးဖြည့်စွတ်နည်းပညာ, ဖြစ်ပြီး, အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်သည်။
အသီးသီး Cleveland နှင့် Philadelphia တွင်ယခုလနှောင်းပိုင်းရီပတ်ဘလီကန်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းများအတွက်ရရှိနိုင်အတွင်းအပြင်နှင့်အဆောက်အဦးပြင်ပတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုရိုက်ကူးအခါ, TVU ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မှီခိုများ၏တစ်ဦးအပိုဆောင်းအလွှာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလား။ TVU လည်း, အမျိုးသားသဘောတူညီချက်များနှစ်ဦးစလုံး၏တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုလွှမ်းခြုံများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့် On-တည်နေရာသုံးစက်ကိရိယာများကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
"အာမခံ QOS အားကိုးကွန်ယက်ကိုဧည့်ခံ၏သန့်ရှင်းသော Grail ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ခံနိုင်ရည်ထုတ်လွှင့်နေသည်။ TVU CAN နှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိတော့သည်အခြားဂီယာနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဆက်ကပ်အပ်နှံဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ် "ဟုပေါလု Shen, CEO ဖြစ်သူကလည်း, TVU ကွန်ယက်။ "မြင့်မားသောလူအစုအဝေးဒေသများ, ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြား bandwidth ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဝန်းကျင်မှာကနေတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်လုပ်နေတာထုတ်လွှင့်သည်, TVU CAN လက်တွေ့ကျကျဘယ်နေရာကနေမဆိုငြိမ်းချမ်းရေး-of စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကယ်တင်တတ်၏။ "
TVU မိုဘိုင်းဆယ်လူလာက transmitter ထိုကဲ့သို့သောအားကစားအားကစားကွင်းအဖြစ်မတည်ငြိမ်သောသို့မဟုတ် bandwidth ကို-စိန်ခေါ်ဒေသများ, ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများနှင့်အဓိကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပေးတက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ IS + TVU က transmitter အားဖြင့် Powered တစ်ပြိုင်နက်ဆယ်လူလာ 3G / 4G LTE ကို, Wi-Fi, Ethernet, Ka-band နှင့် Ka-band အပါအဝင် bandwidth ကိုနတ်ကတော်မဆိုပေါင်းစပ်, စုပေါင်း ဂြိုဟ်တု, မိုက်ခရိုဝေ့, မိုက်ခရိုဝေ့ကွက်များနှင့် BGAN Sub-ဒုတိယအောင်းနေချိန်နဲ့ထုတ်လွှင့်ပုံရိပ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်။ အဆင့်မြင့်ရှေ့သို့မှားယွင်းနေသည်ပြင်ဆင်ခြင်းနည်းပညာသာလွန်ဂီယာစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်လုပ်သည်။ + packet ကို retransmission ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်အောင်းနေချိန်မရှိဘဲအနည်းငယ်မျှသာဒေတာ overhead ကိုအသုံးပြုသည် IS ။
ယခုပင်လျှင်ကမ္ဘာတဝှမ်းဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများရာပေါင်းများစွာ, အနေဖြင့်အသုံးပြု TVU ကွန်ယက် IP ကိုထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏မိသားစုထုတ်လွှင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများတစ်အွန်လိုင်း, ထုတ်လွှင့်ဖို့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော tool ကိုနှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများပေးသည်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်၏ suite ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကယ်နှုတ်တော်မူရန်အသုံးပြုထားပြီး HD ကမ္ဘာ့ဖလားအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များတစ်အရေအတွက်ရိုက်ကူး, နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲနှစ်ဦးစလုံးအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, အ 2013 ပုပ်ရဟန်းမင်း conclave သည် Super Bowl, အ 2015 ပုပ်ရဟန်းမင်း United States ကိုအလည်အပတ်ခရီးနှင့်အများအပြားတွင်နိုင်ငံတကာအားကစား ဖြစ်ရပ်များ။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.tvunetworks.com.
အကြောင်းအရာ TVU ကွန်ယက်®
TVU ကွန်ယက်®အိုင်ပီ-based တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုနည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုက IP-based အခြေခံအဆောက်အအုံမှ - ရှာမှီး, ဂီယာ, လမ်းကြောင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်ရာ - TVU ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့် '' SDI-based စစ်ဆင်ရေးအသွင်ပြောင်းကူညီပေးသည်။ TVU®သတင်းထုတ်လွှင့်, ကို web streaming များ, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး, အားကစား, ကော်ပိုရိတ်နှင့်အစိုးရတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေထက်ပိုမို 80 နိုင်ငံများရှိလူအပေါင်းတို့အရွယ်အစား၏ဖောက်သည်များဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယူအက်စ်အေ, တရုတ်နှင့်အခြားအဓိကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်စျေးကွက်မှာတော့TVU®က၎င်း၏ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. အားလုံးသတင်းထုတ်လွှင့်ဘူတာ၏ကြီးမားသောအများစုနှင့်အတူကြီးစိုးစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏စီးပွားဖြစ်နည်းပညာဖြစ်၏အသုံးပြုခြင်း, TVU ရဲ့ uplink ဖြေရှင်းနည်းများ, ဆယ်လူလာမဆိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဂြိုဟ်တုတိုက်ရိုက်လွှကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, မိုက်ခရိုဝေ့, Wi-Fi နှင့် Ethernet IP ကိုဆက်သွယ်မှု HD လက်တွေ့ကျကျဆိုတည်နေရာမှဗီဒီယို။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အိုင်ပီဗီဒီယို isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော tvu TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့် 2016-06-30
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ: Bonneville Denver
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်သူ / သတင်းထောက်